Nkwado Semalt 5 Nke Ngwa Ngwaọrụ Weebụ Kasị Mma
Nchịkọta weebụ bụ usoro mgbagwoju anya nke na-eme ka nchịkọta data dị mma site n'Internet ma dọta ozi bara uru maka ndị ọrụ. O nwere ike ọ gaghị ekwe omume ịchọta ngwanrọ ngwanrọ weebụ ma ọ bụ ngwá ọrụ dịka enwere ọtụtụ nhọrọ n'ebe ahụ. Otú ọ dị, ụfọdụ ihe omume na-achọ ọrụ nhazi ụzụ ma ndị nke ọzọ dị oke ọnụ, ọ gaghị adabara mmalite.
N'ebe a, anyị ekwuola banyere software kacha mma maka weebụ maka ịzụ ahịa ma ọ bụghị nke azụmahịa.
Ficstar bụ ọrụ dị ike dị n'ịntanetị nke na-adịghị mkpa ka ị jikọta ma melite aka data ahụ. Kama nke ahụ, ọ na-akọwa, nyochaa, ma na-ahazi data maka gị: mgbe ahụ, ọ na-adaba ma jiri ngwaahịa na ọrụ dị icheiche nke weebụ. Iji Ficstar, ịkwesighi ịlele ndekọ ma ọ bụ jikọta akwụkwọ data dịka ọ ga-eme ihe niile dị ka ntụziaka gị na ihe ị chọrọ. Site na e-azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ na-azụ ahịa na ndekọ aha weebụ, software a nwere ike wepụ ụdị data niile, na-ahapụ anyị ka anyị lelee nsonaazụ zuru oke na-enweghị ego ọ bụla.
iWeb bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ahịa na ndị na-abụghị ndị ahịa..Ọ na-enye anyị ohere ịkwado weebụ ma ọ bụ blog, chọpụta ntinye maka ntinye, nyochaa ma nyochaa àgwà ahụ, ma kwụọ ụgwọ ahụ ozugbo arụ ọrụ anyị dịka ọchịchọ na atụmanya anyị si dị. Ọ bụrụ na ị bụ mmalite, ọ dịghị mkpa ka i chegbuo ọnụahịa ya dịka iWeb agaghị efu gị karịa $ 40 kwa ọnwa. Ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma data ntinye na ọdịnaya ntinye ngwá ọrụ na ịntanetị.
TheWebMiner bụ n'ezie ụlọ ọrụ ntanetị weebụ nke gosipụtara software nke otu aha. Usoro a dị ike na-emepụta data buru ibu n'oge ọ bụla, ma na-enye ndị mmadụ ọrụ ntanye na ịjụ ọrụ na ndị ọrụ ya. N'agbanyeghị ụdị data ị chọrọ, TheWebMiner ga-emezu ihe ị na-atụ anya. Site na nchịkọta oge nke oge na-egosi akụkọ ma ọ bụ mmelite banyere ndị asọmpi na ahịa, software a ga-enye gị ụdị ozi ọ bụla. Ụfọdụ n'ime nhọrọ ya kachasị mma bụ akara ngosi onyonyo, nchọpụta data dị mgbagwoju anya, na njirimara na-emekarị.
Dị ka TheWebMiner, WebSundew bụ usoro dị ike ma dị ịtụnanya maka ntanetị weebụ maka ma azụmahịa ma ọ bụghị nke azụmahịa. Ọ na-enye aka wepụ data sitere na weebụsaịtị na nnukwu ọsọ na arụpụtaghị ihe. WebSundew na-ahapụ anyị ka anyị mepụta usoro ntinye data ma na-echekwa ozi ma ntanetị na offline. Ndị ahịa nke usoro a maara na WebSundew nwere ike ịnakọta, nyochaa ma kpochapụ ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị nkà ọ bụla.